အနုပညာအသိုင်းအဝန်းက ချမ်း​မြေ့​မောင်​ချိုကို ဝိုင်း Vote ကြတယ်ဆိုတာတွေကို အခုလို တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဦးဝင်းမြိုင် - Apannpyay Media
အနုပညာအသိုင်းအဝန်းက ချမ်း​မြေ့​မောင်​ချိုကို ဝိုင်း Vote ကြတယ်ဆိုတာတွေကို အခုလို တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဦးဝင်းမြိုင်
အနုပညာကဏ္ဍ August 9, 2018
အနုပညာအသိုင်းအဝန်းက ချမ်း​မြေ့​မောင်​ချိုကို ဝိုင်း Vote ကြတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကို တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဦးဝင်းမြိုင်
လတ်​တ​လော ပရိသတ်​​တွေအရမ်းကို စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ Myanmar Idol Season3ပြိုင်​ပွဲ ကြီးက​တော့ ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးသာ ကျန်ရှိတော့တာမို့ ပိုပိုပြီးစိတ်​လှုပ်​ရှားစရာ ​ကောင်းလာပါပြီ။ Voting စနစ်နဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ ပြိုင်ပွဲမို့ ချမ်းသာတဲ့မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းက ဝိုင်း Vote ကြတယ်၊
အနုပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းက ဝိုင်းပြီးတော့ Vote ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ တစ်ချို့သောသူတွေက ငြင်းခုန်မှုတွေပြုလုပ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကို အားပေးတဲ့အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းမြိုင်က ထိထိမိမိနဲ့ပြတ်ပြတ်သားသာပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်တာပါတယ်
ဦးဝင်းမြိုင်ကတော့ “မိသားစုတစ်​ခုမှာ ဖ​အေက သမီးကို အချစ်​ပို မ​အေက သားကို အချစ်​ပို ဒါဟာ ငြင်းမရတဲ့ သဘာဝတရား အနုပညာရှင်​​တွေဟာ ပရိတ်​သတ်​ပြည်​သူရဲ သားသမီး​တွေ မိဘ​တွေဟာ သားသမီးတိုင်းကိုချစ်​တာ သို့​သော်လည်း အချစ်​ပိုတာ​တော့ရှိ​ပေမ​ပေါ့ top 11 ကို​ရောက်​လာတဲ့ သားသမီး​တွေ အားလုံးကို ပြည်​သူ​တွေက ချစ်​ကြတာ ​တော်​ရုံ စ​ကေးနဲ့ ​ရောက်​လာသူ​တွေမဟုတ်​ကြဘူး​လေ
တစ်​​ယောက်​ပဲ ​ရွေးမှာဆို​တော့ ကျန်​ ၁၀ ​ယောက်​ကို စိတ်​မ​ကောင်းစွာနဲ့နုတ်​ဆက်​ကြရမှာပါ ဘယ်​သူ့ကိုမှ အမုန်းမပွားမိပါဘူး အပြစ်​မမြင်​မိပါဘူး အခု top 2.ကျန်​တယ် ကျား နဲ့ မ ​ယောင်္ကျား​လေးက ​ယောင်္ကျား​လေးအသံ မိန်းက​လေးက မိန်းက​လေးအသံအသံ​ကောင်း ကြသလို vote အား​ကောင်းကြတယ်​ ကျားသံ နဲ့ မ သံ key မတူကြသလို ဘယ်​သူပို​ကောင်းတယ်​လို့ ဆုံးဖြတ်​လို့မရနိုင်​ဘူး ကျား နဲ့ မ ဆို​တော့ အား​ပေးမှုအ​ပေါ်မှာ ​ယောင်္ကျားနှာဘူး မိန်းမနှာဘူး​တွေဖြစ်​မကုန်​ကြပဲ
ကိုယ်​နှစ်​သက်​ရာကို လွတ်​လပ်​စွာအား​ပေးကြဖို့ပဲရှိတယ်​ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းက သိုင်းဝိုင်​ကြတယ်​ဆို​သော်​ငြား သန်း ၆၀ နဲ့ယှဉ်​ရင်​ တကယ့်​ လက်​တစ်​ဆုပ်​စာပဲရှိတယ်​ winner ရသူရဲ့ ကံကြမ္မာလို့သာ မှတ်​ယူကြပြီး အား​ပေးကြဖို့ပါပဲ ​မောင်​ချို​ရေ သမီးလည်း မမှား​အောင်​ဆိုတတ်​ပါတယ်​ဆိုတာ final မှာ ပြတ်​ပြတ်​သားသား လှလှပပ သီဆို တင်​ဆက်​ ပြိုင်​ပွဲဝင်​လိုက်​ပါ​တော့ top 11 ပြိုင်​ကြရာမှာ 11 ဟာ top ဖြစ်​တယ်​ဆိုတာ
ထင်​ရှား​အောင်​ ကြိုးစားပြလိုက်​ပါ​တော့ ​အောင်​မြင်​ပါ​စေ FIGHTING! CMMC.” ဆိုပြီး တော်တော်လေးကို အရည်အချင်းရှိလို့ Top2ထဲကို ပါလာတဲ့အကြောင်းနဲ့ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းက သိုင်းဝိုင်းကြတယ်ဆိုတာ သန်း ၆၀သော ပရိသတ်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် လက်တစ်ဆုပ်စာပဲရှိတဲ့အကြောင်းကိုေပြောပြထားတာပါ။ဦးဝင်းမြိုင်ကတော့ Top 11 ထဲမှာ 11 က top ဖြစ်​တယ်​ဆိုတာ အပြည့်အဝကို ထောက်ခံနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေထဲမှာရော ဦးဝင်းမြိုင်နဲ့ အတွေးချင်းတူတဲ့သူတွေရှိကြလားဆိုတာေပြောသွားခဲ့ပါဦးနော်။
Source;Win Myaing’s Facebook
အနုပညာအသိုငျးအဝနျးက ခမျြး​မွေ့​မောငျ​ခြိုကို ဝိုငျး Vote ကွတယျဆိုတဲ့ဝဖေနျမှုတှကေို တုံ့ပွနျလိုကျတဲ့ ဦးဝငျးမွိုငျ
လတျ​တ​လော ပရိသတျ​​တှအေရမျးကို စိတျဝငျစားနကွေတဲ့ Myanmar Idol Season3ပွိုငျ​ပှဲ ကွီးက​တော့ ပွိုငျပှဲဝငျနှဈဦးသာ ကနျြရှိတော့တာမို့ ပိုပိုပွီးစိတျ​လှုပျ​ရှားစရာ ​ကောငျးလာပါပွီ။ Voting စနဈနဲ့ အဆုံးအဖွတျပေးတဲ့ ပွိုငျပှဲမို့ ခမျြးသာတဲ့မိသားစုအသိုငျးအဝိုငျးက ဝိုငျး Vote ကွတယျ၊
အနုပညာရှငျအသိုငျးအဝိုငျးက ဝိုငျးပွီးတော့ Vote ကွတယျဆိုပွီးတော့ တဈခြို့သောသူတှကေ ငွငျးခုနျမှုတှပွေုလုပျနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကိုတော့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုကို အားပေးတဲ့အနုပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ ဦးဝငျးမွိုငျက ထိထိမိမိနဲ့ပွတျပွတျသားသာပွနျလညျတုံ့ပွနျလိုကျတာပါတယျ
ဦးဝငျးမွိုငျကတော့ “မိသားစုတဈ​ခုမှာ ဖ​အကေ သမီးကို အခဈြ​ပို မ​အကေ သားကို အခဈြ​ပို ဒါဟာ ငွငျးမရတဲ့ သဘာဝတရား အနုပညာရှငျ​​တှဟော ပရိတျ​သတျ​ပွညျ​သူရဲ သားသမီး​တှေ မိဘ​တှဟော သားသမီးတိုငျးကိုခဈြ​တာ သို့​သျောလညျး အခဈြ​ပိုတာ​တော့ရှိ​ပမေ​ပေါ့ top 11 ကို​ရောကျ​လာတဲ့ သားသမီး​တှေ အားလုံးကို ပွညျ​သူ​တှကေ ခဈြ​ကွတာ ​တျော​ရုံ စ​ကေးနဲ့ ​ရောကျ​လာသူ​တှမေဟုတျ​ကွဘူး​လေ
တဈ​​ယောကျ​ပဲ ​ရှေးမှာဆို​တော့ ကနျြ​ ၁၀ ​ယောကျ​ကို စိတျ​မ​ကောငျးစှာနဲ့နုတျ​ဆကျ​ကွရမှာပါ ဘယျ​သူ့ကိုမှ အမုနျးမပှားမိပါဘူး အပွဈ​မမွငျ​မိပါဘူး အခု top 2.ကနျြ​တယျ ကြား နဲ့ မ ​ယောကငြ်ျား​လေးက ​ယောကငြ်ျား​လေးအသံ မိနျးက​လေးက မိနျးက​လေးအသံအသံ​ကောငျး ကွသလို vote အား​ကောငျးကွတယျ​ ကြားသံ နဲ့ မ သံ key မတူကွသလို ဘယျ​သူပို​ကောငျးတယျ​လို့ ဆုံးဖွတျ​လို့မရနိုငျ​ဘူး ကြား နဲ့ မ ဆို​တော့ အား​ပေးမှုအ​ပျေါမှာ ​ယောကငြ်ျားနှာဘူး မိနျးမနှာဘူး​တှဖွေဈ​မကုနျ​ကွပဲ
ကိုယျ​နှဈ​သကျ​ရာကို လှတျ​လပျ​စှာအား​ပေးကွဖို့ပဲရှိတယျ​ အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးက သိုငျးဝိုငျ​ကွတယျ​ဆို​သျော​ငွား သနျး ၆၀ နဲ့ယှဉျ​ရငျ​ တကယျ့​ လကျ​တဈ​ဆုပျ​စာပဲရှိတယျ​ winner ရသူရဲ့ ကံကွမ်မာလို့သာ မှတျ​ယူကွပွီး အား​ပေးကွဖို့ပါပဲ ​မောငျ​ခြို​ရေ သမီးလညျး မမှား​အောငျ​ဆိုတတျ​ပါတယျ​ဆိုတာ final မှာ ပွတျ​ပွတျ​သားသား လှလှပပ သီဆို တငျ​ဆကျ​ ပွိုငျ​ပှဲဝငျ​လိုကျ​ပါ​တော့ top 11 ပွိုငျ​ကွရာမှာ 11 ဟာ top ဖွဈ​တယျ​ဆိုတာ
ထငျ​ရှား​အောငျ​ ကွိုးစားပွလိုကျ​ပါ​တော့ ​အောငျ​မွငျ​ပါ​စေ FIGHTING! CMMC.” ဆိုပွီး တျောတျောလေးကို အရညျအခငျြးရှိလို့ Top2ထဲကို ပါလာတဲ့အကွောငျးနဲ့ အနုပညာအသိုငျးအဝိုငျးက သိုငျးဝိုငျးကွတယျဆိုတာ သနျး ၆ဝသော ပရိသတျတှနေဲ့ယှဉျရငျ လကျတဈဆုပျစာပဲရှိတဲ့အကွောငျးကိွုေပွောပွထားတာပါ။ဦးဝငျးမွိုငျကတော့ Top 11 ထဲမှာ 11 က top ဖွဈ​တယျ​ဆိုတာ အပွညျ့အဝကို ထောကျခံနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှထေဲမှာရော ဦးဝငျးမွိုငျနဲ့ အတှေးခငျြးတူတဲ့သူတှရှေိကွလားဆိုတွာေပွောသှားခဲ့ပါဦးနျော။
မိဘမဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ အလှူအတန်း လုပ်ခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ်…
အကယ်ဒမီ မြင့်မြတ်ကတော့ မနေ့က မိဘမဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို သွားပြီး အလှူအတန်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြင့်မြတ်က ငဒူ ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကြီး ရုံတင်နေချိန်ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒိဇာတ်ကောင်းရဲ့ ကာရိုက်တာအတိုင်း အပြင်မှာလည်း ရက်ရက်ရောရောအလှူအတန်းတွေ လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့က ခုဆို သုံးကြိမ်မြောက် မိဘမဲ့ကလေးတွေကို သွားရောက်ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။ မြင့်မြတ်ကတော့ ခုလက်ရှိ အအောင်မြင်ဆုံး …
ယောက်င်္ကျားတကာ မုဒိန်းကျင့်ချင်စိတ် ဖြစ်အောင် ပြုပြင်လိုက်ပါအုံး လို့ ပြောလိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် လက်တလော အွန်လိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနုပညာရှင်အချင်းချင်း မခံမရပ်နိုင်တွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ အရံသရုပ်ဆောင် နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ဟာ တော့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သိန်း၁၀၀ တောင်းတဲ့ မိန်းမကို ပညာသားပါပါ တုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ သူတုန့်ပြန်လိုက်ပုံက …
ဂယက်မဆိုတော့ ပြောသမျှစကားတိုင်းက ဂယက်ထသွားတာ ဆိုတဲ့ ရွှေမှုံရတီ
ပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်ကြီးရေ ရွှေမှုံရတီကတော့ အချေကနေ အဂေါ်ဘက်ပြောင်းသွားပါပြီ။ “ နှလုံးသားတံခါးကို ဝင်ချည် ထွက်ချည်လုပ်တဲ့ ဧည့်သည်” ဇာတ်ကားမှာ ရွှေမှုံရတီက ရွှေထူး နဲ့ နေခြည်ဦး တို့ထက် စီနီယာကျတဲ့ သရုပ်ဆောင် မမ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီကို ဂေါ်နေတယ်လို့ ပြောရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဧည့်သည် …